LEGO NINJAGO 71747 The Keepers's Village ကိုဝယ်သင့်သလား။
LEGO NINJAGO 71747 ဂိုးသမားကျေးရွာပြန်လည်သုံးသပ်
14 / 04 / 2021 14 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1306 Views စာ0မှတ်ချက် 71746 တောတွင်းနဂါး, 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ, 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက်, ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် Mammatus, ကျွန်းကိုးလ်, ကျွန်းဂျေး, ကျွန်းကိုင်, Lego, Lego Ninjago, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Ninjago, NINJAGO ရာသီ 14, reviews, အဆိုပါကျွန်း, Thunder ဂိုးသမား
၎င်းသည်နောက်ဆုံးလှိုင်းတွင်အကြီးဆုံးမဟုတ်ပါ Lego Ninjago အစုံ, ဒါပေမယ့် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Ninjago သင်္ဘောသားများသည်ရာသီအလိုက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ ဦး တည်နေစဉ်တွင်ဖြစ်သည် 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက် (ပြန်လည်သုံးသပ်) ဒီလှိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းဈေးနှုန်းကိုဖြည့်သည်၊ အဓိကကျသောအချက်မှာဖြစ်နိုင်သည် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ.
ကျွန်ုပ်တို့အားဗေဒ၏အရသာမျှသာပေးစွမ်းနိုင်ပြီးကျန်အကြောင်းအရာများအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်စျေးနှုန်းအပြည့်အဝဖြင့်, playset သည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောတည်ဆောက်မှု၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်များနှင့်အသေးစားပုံသဏ္withာန်များဖြင့်အစုံ၏လှိုင်းလုံးတစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာကျောက်ချရပ်နားထားသည်။
theme: Ninjago အမည်သတ်မှတ်မည် - 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 အပိုင်းပိုင်း: 632 အသေးစားပုံများ: 5
၏ box ပေါ်အသက်အပိုင်းအခြား 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ 8+ ဖြစ်ပြီဆိုတော့သင်လည်းပါ ၀ င်ပတ်သက်နေတာတွေကိုမမျှော်လင့်သင့်ပေ၊ သို့သော်ထိုမျှော်လင့်ချက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်လျှင်ဒီအစုံသည်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသောဆောက်လုပ်သူကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ခြင်းကိုသင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။
အရာများ start အသီးအရွက်များမထည့်သွင်းမီကမ်းခြေမြေအနေအထားကိုတည်ဆောက်ရန်အလွှာအလွှာများ၊ classic အရိုးစုခေါင်း (ဒီမော်ဒယ်၏သင်၏လွမ်းဆွတ်မှုသို့ကစားရန်စွမ်းရည်ကိုပထမဆုံးအရိပ်အမြွက်) ။ ဆောက်လုပ်ရေး၏ဤareaရိယာတွင်ဝှက်ထားသော tile သေနတ်သမားနှင့်ဖြုတ်ချထားသောသစ်ပင်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ချက်ချင်းပေါ်ထွက်လာသည့်သင်စိတ်စွဲမှတ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ -catching display ကို။
ဒါ p ပါartအပူပိုင်းဒေသဗေဒကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အရောင်များကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊art ဒီတစ်ခုလုံးကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုအသက်ဝင်စေတယ် နီးပါးတိုင်းထောင့်မှာ 71747 The Keepers '' ကျေးရွာဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ယခင် ၆၂၂ ခုလုံးကိုပညာရှင်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရန်ယခင်တည်နေရာအခြေပြုပစ္စည်းများထက် ကျော်လွန်၍ သွားခဲ့သည်။ A-frame လှေကားများနှင့်အတူမြင့်တက်သောသစ်ရွက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျေးရွာဝန်းကျင်၌မြှုပ်နှံထားသောလက်နက်များနှင့်ကိရိယာများသို့မဟုတ်ကျောက်တုံးများပါ ၀ င်သည်။ ဂူနှင့်၎င်း၏ကပ်လျက်ထွင်းထုသတ္တဝါ။
ဒီမော်ဒယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းဟာတည်ဆောက်မှုကာလအတွင်းသင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနေရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သက်မဲ့သက်မဲ့အရာဝတ္ထုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ နဂါးပါးစပ်ပန်းပုနောက်ကွယ်မှအနမ်း - နောက်မှ sm နှင့်အတူရှင်သန်လာသည်art Trans-orange element များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ င်းဒိုးသည်လက်ချောင်းအနည်းဆုံးမှသာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
ဤအပိုင်းမှအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်အလျားလိုက်နေရာ - သစ်ရွက်၏နောက်ကွယ်တွင်အသေအချာဖုံးကွယ်ထားသည့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကလစ်များနှင့်ကမ်းခြေနှင့်လှေကားအကြားကွဲသွားသည် - လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်နောက်ဆုံးအဆင့်အထိစောင့်ရမည်။ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်ကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာ။
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်၏ရာဇပလ္လင်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိနေသောမြင့်မားသောတိုင်လုံးတိုင်သည် ရှောင်လွှဲ၍ မရသောထပ်ခါတလဲလဲတည်ဆောက်မှုဖြစ်သော်လည်းကျောက်တွင်းကျောက်တုံးသုံးခုသည်ဒီဇိုင်းသမားများက၎င်းတို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းလက်နက်တစ်ခုချင်းစီနှင့်စုပေါင်းထားသည့်တတိယအနေနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။
သင်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့်အားထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည့်ပုံစံတစ်ခုဖြင့်ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ 'ကျေးရွာ' သည်လူနေထူထပ်သောကျေးလက်ဒေသ၏ပုံရိပ်များကိုပုံဖော်ပေးသည်၊ သို့သော် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ အဲဒီအစားအကျဉ်းထောင်တစ်ခုနှင့်ဝှက်ထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကဲ့သို့ရိုးရာ playset ထောင်ချောက်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမကောင်းဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့ st ကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ပါartဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အချက်များအတွက်အချက်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကလည်းကူညီပေးသည် - တူ 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက် နှင့်ဤ subtheme ၏ကျန် - 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ အဆိုပါ evokes တစ်ခုဗေဒတက်ထုပ်နေသည် classic ပင်လယ်ဓားပြများ subtheme ကျွန်းသား။ ဝါရင့်သည် Lego ပရိတ်သတ်တွေကလွမ်းဆွတ်မှုကိုကြိုဆိုကြတဲ့ပုံပဲ၊ မင်းဟာ '၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကမြင်ကွင်းမှာမပါဝင်ခဲ့ရင်တောင်မင်းဟာတန်ဖိုးထားဆဲပါ Lego အုပ်စုတစ်စုသည်သက်တမ်းတို။ တက်ကြွသောပုံရိပ်နှင့်အရောင်ရောစပ်မှုများကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်သက်တမ်းတိုသောအကွာအဝေးကိုပုံဖော်သည်။
သို့သော်နှိုင်းယှဉ်ချက်သည်လုံးဝအပြုသဘောမဟုတ်ပါ - ကျွန်းသားများသည်ရှေးခေတ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ပုံသဏ္givenာန်ကိုဖော်ပြသောကြောင့်ယနေ့ခေတ်အတွက်မသက်မသာပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤအကွာအဝေးတွင်ဂိုးသမားများကိုရန်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မှားယွင်းသောဘက်သို့ကျဆင်းခြင်းနှင့်တူသည် classic ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဟာနောက်ထပ်တစ်ရက်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
သငျသညျအတိတ်ရနိုင်လျှင် Lego ၂ မိနစ်ကျော်ကျော်နိုးနေရန်အတွက် Group ၏မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ထူးခြားသောအသေးစားငါးခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသာဤပုံစံကိုသီးသန့်ပိုင်ဆိုင်သည်။ သူသည် ၀ င်ငွေစျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းနှင့်မထိုက်တန်သော်လည်းကျွန်းကိုးလ်သည်မလိုအပ်ပါ။ ဤနေရာတွင်မည်သို့ပင်ရှိနေစေကာမူရွေးချယ်စရာများကိုတရားမျှတစွာပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျေနပ်လောက်သောစွမ်းရည်ရှိပြီး Ninja သည်သဘောတူညီမှုကိုချိုမြိန်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းများ၏ဤကျွန်းမျိုးကွဲများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Ninjago ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအသေးအဖွဲပုံများ၊ သူတို့၏ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ချုပ်ထားသောဆံပင်ညှပ်များ၏အသေးစိတ်မှသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနုစိတ် torsos နှင့်ခြေထောက်များအထိဖြစ်သည်။ ထိုခံစားချက်သည်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် Mammatus သို့သယ်ဆောင်သည် 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက်နှင့်၎င်းအစုံတွင်ပေါ်လာသော Thunder Keeper နှင့် 71746 တောတွင်းနဂါး.
ဒီလှိုင်း၏အကြီးဆုံးအစုံ၌ရှိသကဲ့သို့, သို့သော်, တစ် ဦး အီးxtra ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်တိုက်ပွဲကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိဖို့အတွက်ရန်လိုမုန်းတီးသူကလွဲချော်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီအခန်းကဏ္fillingကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ကျောက်ခဲသမားတွေအတွက်အငြင်းပွားစရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။
အသစ်နှင့်အသေးစိတ်အသေးစားပုံစံ ၅ ခု၊ အပိုင်း ၆၃၂ ခုနှင့်ကျယ်ဝန်းပြီးအရပ်ရှည်သောကျယ်ပြန့်သောတည်ဆောက်မှုသည်ပေါင် ၅၄.၉၉ အထိပင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ ပေါင် ၄၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ / ယူရို ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ လျှော့စျေးကိုစောင့်စရာမလိုဘဲသင်၏ဆန္ဒစာရင်းကိုမြှင့်တင်သင့်သည်။
မည်သည့်ပေးထားကိုဖြတ်ပြီး Lego Ninjago လှိုင်း - သို့မဟုတ်တကယ်တော့ဖြည့်စွက်မဆိုလှိုင်း Lego set - ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အသေးစိတ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည့်ဘတ်ဂျက်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ထိပ်ဆုံးမှထွက်ပေါ်လာသောအကြီးမားဆုံးနှင့်ဈေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ Lego အစုံ။ (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြည့်ပါ 71722 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာ, 2018 ခုနှစ်၏ 70643 ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘုရားကျောင်း, etc)
71747 The Keepers '' ကျေးရွာ မဖြစ်မနေရှိရမည့်ပုံစံအနေနှင့်စတိုင်နှင့်ယုံကြည်မှုတို့ဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုအသာပေးလိုက်သည် Ninjago14 ကြိမ်မြောက်ရာသီ, ကစားပွဲသို့မဟုတ်ပြသမှုအပေါ်အညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစုံလူနေထူထပ်ဖို့နှင့်အတူအမျိုးစုံရလိုင်း -Up ကိုပေး။
71747 The Keepers 'ကျေးရွာတည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
သင်စုစုပေါင်းတစ်နာရီလောက်အကြမ်းဖျင်းအားထားရလိမ့်မယ် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ။ ၎င်းသည်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပေမယ့် 'dull' အတွက်ဒီဖော်ပြချက်ကိုမမှားပါနှင့်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်ပျင်းစရာကြီးမဟုတ်ပါ။
632 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ။ ဒါကထက် ၁၄၈ နည်းတယ် 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက်ဒီလှိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံးအစုံ။
အပြည့်အ ၀ အတည့်မှာ 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ အလျား ၂၉ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၂၂ စင်တီမီတာနှင့် ၁၉ စင်တီမီတာရှည်လျားသောကြောင့်၎င်းကိုပြသရန်တော်တော်ကျယ်သောစင်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ သင်လိုချင်သည်ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။
71747 The Keepers '' ကျေးရွာ ပေါင် ၄၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ / ယူရို ၄၉.၉၉ အထိ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုငွေသည်သင်သုံးစွဲသောငွေကြေးမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအလွန်မျှတသောစျေးနှုန်းနှင့်တူသည်။
← အိပ်မက်ကိုအလုပ်သတိပေးချက်: အ LEGO Group ဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုငှားရမ်းနေသည်
Bits N 'အုတ် podcast သည်ဒုတိယရာသီအတွက် BIONICLE နှင့် LEGO Rock Raiders ကိုလှောင်ပြောင်သည် →